Echiche iji mee ka gị na onye gị na ya nwee izu ụka | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways, Ihunanya
Mee atụmatụ dị ka di na nwunye Ọ bụ ihe magburu onwe ya, n'ihi na ọ na-enyere aka imeziwanye mmekọrịta ahụ na karịa ihe niile ọ na-emeju anyị na ahụmịhe ọhụụ na oge pụrụ iche. Kwesighi ichere maka ezumike ka ị nwee ike ịme obere atụmatụ, ebe anyị nwere ngwụcha izu. Ọ bụ ya mere anyị ga-enye gị ụfọdụ echiche na mmụọ iji mee atụmatụ maka izu ụka dịka di na nwunye.
Un ngwụsị izu dị ka di na nwunye nke maka ọtụtụ atụmatụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị maara etu esi achọ onyinye ma nwee ọmarịcha ahụmihe dị iche iche. N’ụzọ doro anya, anyị ga-eche maka ihe omume ntụrụndụ na ihe ụtọ nke di na nwunye ọ bụla, mana anyị ga-ahụ atụmatụ mgbe niile maka ihe masịrị anyị.
1 Getaway n'ime ime ụlọ
2 Izu ụka na spa
3 Nkịtị hiking
4 Na-achọpụta akụkụ
5 Njem izu ụka
6 Izu ụka n'obodo
7 Astzọ Gastronomic
8 Ọpụpụ na Paris
Getaway n'ime ime ụlọ
Otu n'ime atụmatụ kachasị mma mgbe otu izu gachara ọrụ bụ iso onye anyị na ya gaa ebe dị jụụ. Gbapụ n'ụlọ ime ime ụlọ zuru oke iji nwee obi ụtọ dị ka di na nwunye. Enwere ọtụtụ ụlọ ime ime obodo na-enyekwa nleta na gburugburu ebe obibi. Anyị nwekwara ike ịchọ ụlọ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị nri ma ọ bụ ndị nwere nnukwu ọdọ mmiri n'èzí. Izu ụka a n'ime ime ụlọ nwere ike ịdị mma iji kwụnye batrị ma nwee mmekọrịta chiri anya dị ka di na nwunye.
Izu ụka na spa
Nke a bụ atụmatụ ọzọ nke a na-achọsi ike ka ya na di na nwunye ahụ nwee ngwụsị izu. A spa na-enye anyị ọtụtụ echiche iji zuru ike. Ke ofụri ofụri, e nwere na-enye na nke i nwere ike iji nkịtị ebe nke ọdọ mmiri na ọgwụgwọ na-emekarị na-akwụ ụgwọ maka n'ebe ndị ọzọ. Di na nwunye nwere ngwugwu puru iche ichoro ịhịa aka ma obu ndi ozo. Site na ịsa ahụ na jacuzzi ruo na ọgwụgwọ mmiri, ndị spa na-enye ụdị echiche dị iche iche ka ngwụsị izu wee ghara ịgwụ.
Di na nwunye kachasị arụ ọrụ nwere ike isonye mee ụfọdụ hiking nzọ ụkwụ. E nwere ụzọ dị mma e gosipụtara nke ọma, nwere nsogbu siri ike na-emegharị maka ọnọdụ anyị, iji nwee ike ịhọrọ nke ga-adịrị anyị mma. N’ụzọ ndị a, ọ ga-ekwe omume ịbanye n’ihe e kere eke ma nwee ezigbo obi iru ala mgbe ị na-egwu egwuregwu dị mma. Withkọkọrịta ụdị ihe omume ntụrụndụ ndị a na onye gị na ya bi bụ nnukwu echiche yana ịgagharị dịkwa ezigbo ọnụ. Ọ dị mfe ịchọta ụzọ dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị ebighi n'obodo ukwu, na-enweghị njem dị oke mkpa.
Chọpụta e nwere ụfọdụ akụkụ pụrụ iche n'akụkụ ebe ibi na ị ka hụrụ anyị. Nwere ike ime ndepụta nke ebe ndị a na-achọpụtaghị na nso nso ịchọrọ ịga. Typesdị nleta ndị a anaghị achọ karịa izu ụka, n'ihi ya ha zuru oke maka ileta dịka di na nwunye na atụmatụ ọzọ. Site na obere obodo gaa mpaghara eke ma ọ bụ obodo dị nso, ihe niile nwere ike ịbụ ezigbo ebe iji gbanahụ ntakịrị ihe na di na nwunye ahụ.
Njem izu ụka
Ọ bụrụ na obi abụọ na-amasị unu, ị ga-ekpori ndụ oge na a njem izu ụka. Site na nke a, anyị pụtara atụmatụ nke unu abụọ ga-anụ ụtọ ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ. Site na ịkwọ ụgbọ mmiri ruo na ịnya anyịnya, akwa zip ma ọ bụ ịrị ugwu. Anyị kwesịrị ịgakwuru di na nwunye ahụ wee chọọ ohere anyị nwere n'akụkụ ebe anyị bi. Naa ọ dị mfe ịchọta ozi site na weebụ, yabụ ọ bụ nnukwu ohere maka gị abụọ.
Izu ụka n'obodo
Ọ bụrụ n’inwere obodo n’uche ịchọrọ mgbe ọ bụla ị ga-aga ọ dị nso, wee ga n’ihu. Atụmatụ na obodo nwekwara ike ịmasị. Ọ bụrụ na anyị ga-eleta obodo ọ bụla, anyị ga-ewetara anyị atụmatụ mgbe niile ka anyị wee ghara ịfufu ihe ọ bụla. Oge izu ụka nwere ike ịdị mkpụmkpụ dabere na obodo ahụ ebe ọ bụ na ụfọdụ enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ. Ebe ọ bụ na ihe ncheta kachasị mkpa nye okporo ụzọ kachasị atụ, ebe obibi na ụlọ oriri na ọliụ liveụ kachasị mma agaghị echefu. Makingmepụta ndepụta nwere ike inyere anyị aka ịhụ obodo ahụ kpamkpam na-ahapụghị anyị ihe ọ bụla dị mkpa.
E nwere di na nwunye ndị na-amasị ya ahụmahụ gastronomicka ha nwere ike ịnụ ụtọ ụtọ ọhụrụ na nri. Na njem ọ bụla anyị nwere ike ịnwale ụdị nri ma ọ bụ gaa n'ụlọ nri nke nwere nyocha dị mma. Mana enwere ọtụtụ di na nwunye na-enwe obi ụtọ ịme ụzọ gastronomic. Anyị nwere ike ịchọ ihe omume pụrụ iche, dịka asọmpi tapas, nke na-adịwanye njọ, mana ọ ga-ekwe omume ịga ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na-ewu ewu n'oge ọ bụla.
Ọpụpụ na Paris
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchụpụ ụlọ ahụ na windo, ọ dịghị ihe ọzọ ihunanya ime atụmatụ dị ka di na nwunye Karịa ngwụsị izu na-aga ngwa ngwa na Paris. Enwere ụgbọ elu ndị dị ọnụ ala, ọ bụ ezie na ha anaghị adaba na ngwụsị izu, mana anyị nwere ike ịchọ ụzọ ndị ọzọ. Isi okwu a bụ iju onye anyị na ya na obodo nwere mmekọrịta ịhụnanya karịa ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Atụmatụ maka izu ụka dị ka di na nwunye